Sadaasaa 09, 2020
Muummicha Ministeeraa Abiy Ahimed
Muummichi ministeeraa Itiyoopiyaa Abiy Ahimed hojiin seera eegsisuu seera dhablummaan kun erga dhaabatee booda dhiyeenya ni xumurama jedhan. Muummichi ministeerichaa ergaa twiteer irratti barreessuu dhaan michoota kanneen yaaddoo qaban ibsan galateffataniiru. Duulli geggeessamaa jiru dhimma ofii kan keessoo bulchuuf dandeettii kan qabu mootummaa biyyaan geggeessamaa jira jedhan. Dubbi himaan ministeera ittisaa Itiyoopiyaa jeneraal Mohaammed Tesemmaa garuu jeettiiwwan keenya nageenyi isaanii eegamee ergama isaanii raawwataa jiru jechuun fudhatama dhabsiisuu isaanii VOAtti himan.
Dilbata kaleessaa muummichi ministeerichaa itti gaafatamaa dhaaba basaasaa, ministrii haajaaalaa fi itti gaafatamaa waraana walii gala haaraa muudanii jiru. Muudamni kun naannoo Amaaraa irratti dhiibbaa kan geessise ta’us mootummaan ibsa kenne hin qabu. Muummichi ministeeraa Abiy kaleessa fuula FB isaanii irratti, naannoo Tigraay keessatti seera federaalaa hojii irra oolchuuf mirga himatamuu dhabuu kan mulqamu ta’uu hawaasa addunyaaf ibsaniiru.
Haasaa sanaanis himannaa fi heerri cabuu jechuun angawoota IWEHAT hanga tokkoon himannaalee dhiyaae illee tarressanii jiran. Muummichi ministeeraa Abiy mariif yaada dhiyaate fudhatama dhabsiisan. Sambata darbe barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa waliin haasaa bilbilaa geggeessuu isaanii ibsaniitu. Tokkummaan mootummootaa ibsa baaseen hoogganoonni lamaan naannoo Tigraay keessatti sabatiinsa dhabamuu uumamee fi araarteessummaa IGAD fi waajjira barreessaa dureen ta’e irratti mari’atan jedhee jira.
Xayyaarri Waraanaa Mootummaa Naannoo Meqeleetti Rukutamuu Hoogganni Naannichaa Beeksiseera. Mootummaan Immoo Ni Haale
Joo Baayden Pirezdaantii Yunaaytis Isteets 46ffaa Akka Ta’uuf Jiran Beekkame
Humni Qilleensaa Waraana Itoophiyaa Haleellaa Naannoo Maqaleetti Geggeesseen Meeshaa Waraanaa Hedduu Barbadeesse, Jedhu Muummen Ministiraa
Keenyaan qorsa koronaaf hojjachuutti jiran nama biyya isii irratti ilaaluutti jirti
Itiyoophiyaatti Barnootni Jalqabamuuf Ture Yeroo Hin Muftoofneef Dabarfame